Customized Alumina intonga abavelisi abavela eTshayina | XTL
Imveliso engundoqo ye-fire assay crucible, i-Graphite crucible, i-Silicon carbide crucible.Kwakhona yamkela i-OEM kunye ne-ODM.
ISagger yeCeramic eRefractory
I-Alumina yeCeramic Crucible
I-Alumina Ceramic Substrate / ipleyiti
Inxalenye yeAlumina yeCeramic
Inxalenye yeBn yeCeramic
Inxalenye yePbn yeCeramic
Ekhaya > Iimveliso > IAlumina Ceramic > I-Alumina Ceramic Tube/pipe/rod/roller
Ubushushu obuphezulu obuphezulu be-alumina yeetyhubhu ze-ceramic abavelisi abavela eTshayina | XTL
Ubuchwephesha obulungiselelwe ubungakanani beporous alumina abavelisi ityhubhu Iimveliso | XTL
Customized square alumina ceramic abavelisi ityhubhu evela eTshayina | XTL
Umgangatho ophezulu womgangatho ophezulu wodongwe lweCeramic Uvavanyo loMlilo Abavelisi beNkampani yokunyibilikisa igolide - XTL
Intonga ye-alumina ceramic ithelekiswa neemveliso ezifanayo kwimarike, ineenzuzo ezibalaseleyo ezingenakuthelekiswa nanto malunga nokusebenza, umgangatho, inkangeleko, njalo njalo, kwaye yonwabela igama elihle kwimarike.I-XTL ishwankathela iziphene zeemveliso ezidlulileyo, kwaye ngokuqhubekayo iziphucula. Ukucaciswa kwentonga ye-Alumina ceramic inokwenziwa ngokweemfuno zakho.
THUMELA UBUZO NGOKU
Intonga ye-alumina ceramic
Ubunjineli beCeramic baMazwe ngaMazwe benza iAlumina& I-Zirconia Rods njengemveliso eqhelekileyo ye-ceramic. IAlumina& I-Zirconia inokuthatha amaqondo obushushu ukuya kuthi ga kwi-1650 ° C, ibe nokuzinza okuphezulu kakhulu kweqondo lokushisa, ukuxhathisa ukubola kweekhemikhali, kunye nokunxiba okuphezulu kunye nokuxhathisa i-abrasion.
Ubunyulu: 50%, 75%, 85%, 95%, 99% Al2O3
Umbala: omhlophe, opinki, otyheli okhanyayo
Indawo yeMvelaphi: iShenyang, eTshayina (ekuMmandla)
Ixesha lokuhambisa: 3-30days leyo ngokobungakanani
Ixesha lorhwebo: FOB, EXW, CIF, CFR
Ixesha lentlawulo: T/T, Western Union, L/C
Isiqinisekiso: ISO,CQC ROHS
Ukwenza isampulu yexesha: lonke uhlobo kwisitokhwe
I-advanteji: umgangatho ophezulu kunye nokuchaneka okuphezulu kokulinganisa, impendulo ekhawulezayo yobushushu, amandla aphezulu omatshini, ixesha elide lenkonzo, uluhlu olubanzi lokulinganisa itemp -200-1500centigrade
1) Izixhobo: 95% ialumina oxide, 99% i-alumina oxide
2) Isicelo: Isetyenziselwa zonke iintlobo zezixhobo zokufudumeza zombane kunye nezixhobo zombane, kunye noomatshini belaphu
3) Ulungile kakuhle kwaye unamandla aphezulu
4) Iintlobo ngeentlobo zengcaciso ekhoyo
5) I-OEM, i-ODM kunye ne-OBM zamkelwe
Ukusebenza kwi-Industrial Ceramic
Iyunithi I-steatite ceramic 95 Al2O3 96 Al2O3
Iimpawu zoMzimba Unizi lolwapho kuyiwa khona g/cm3 2.7 3.6 3.6
Ukufunxwa kwamanzi % 0 0 0
Iimpawu zoomatshini Amandla e-Flexural Mpa 145 320 340
Ubunzima Vickers I-Gpa 5.7 12.2 13.5
Imodyuli ye-elastic I-Gpa 120 280 320
Umlinganiselo wePoisson - 0.21 0.22 0.23
Iimpawu zeThermal Ukwandiswa komlinganiso womgca (20-5000C) 10-6/℃ 7.9 7.1 7.2
I-Thermal conductivity w/(m.k) 2.5 16 24
Ubushushu obuthile *10-3J/(kg*K) 0.75 0.78 0.78
Iimpawu zoMbane Idielectric constant (1MHZ) - 6.2 9 9.4
I-angle yokulahlekelwa kwe-dielectric *10-4 18 15 5
Amandla e-Dielectric *106V/m 18 12 15
Izixhobo: Sinomgca opheleleyo wemveliso kunye nezixhobo zokuvavanya, kuquka umgca wokuvelisa ngokuzenzekelayo.
Ifilosofi:Ngomgangatho obalaseleyo, inkonzo yodidi lokuqala, ishishini elinyanisekileyo
Umgangatho:Siphumelele i-IS0 9001:2005. umgangatho, uzinzile, uthembekile
Iqela: Sineqela lethu lokuphanda, ukuyila, ukuvelisa nokuthengisa.
Iziqinisekiso kunye nePatent
* Umvelisi oqeqeshiweyo ukusukela ngo-1997.
* Ukulawulwa komgangatho ongqongqo kwinkqubo yemveliso kunye nokunyamezelana.
* Iisampuli zasimahla ziyafumaneka
* Imveliso eyenziwe ngokwezifiso ngokusekelwe kumzobo wakho okanye iinkcukacha
* Ukuhanjiswa ngexesha kunye nenkxaso kunye nenkonzo ethembekileyo
* Uluhlu lwezinto ezikhoyo ukuze zithunyelwe ngokukhawuleza
* Sigcina imfihlo yayo yonke imizobo kunye nolwazi lweshishini phakathi kwethu.
Ngaba uyinkampani yokurhweba okanye umenzi?
Ungabonelela ngeesampulu zasimahla?
* Ewe, sinokunikezela ngesampulu yasimahla ukuba sinayo esitokhweni, kodwa umrhumo wekhuriya kufuneka uqokelelwe.
Ngaba uyayamkela imveliso elungiselelweyo ngokusekwe kwiinkcukacha zethu?
* Ewe, sinikezela ngenkonzo ye-OEM kunye ne-ODM. Sithumele nje umzobo wakho ukuba unayo. Ukuba awunawo umzobo, sixelele nje umbono wakho, siza kukwenzela umzobo.
Lithini ixesha lokuhambisa?
* Iintsuku ezi-7 zokusebenza kwiimveliso eziqhelekileyo iintsuku ezingama-30 kwiimveliso ezilungiselelwe.
Liling Xing Tai Long Special Special Ceramic Co., Ltd
Umnxeba: +86 13975373343
Inxalenye yobuchwephesha be-alumina ceramic yenziwa eTshayina
Ngaphezulu kweminyaka eyi-13 yenkonzo yoshishino
Sisebenze nabathengi abaninzi bangaphandle
Thatha ithuba lolwazi lwethu kunye namava angenakuthelekiswa nanto, sikunika eyona nkonzo ilungileyo yokwenza ngokwezifiso.
Into yokuqala esiyenzayo kukuhlangana nabathengi bethu kwaye sithethe ngeenjongo zabo kwiprojekthi yexesha elizayo.
Ngexesha lale ntlanganiso, zive ukhululekile ukunxibelelana ngezimvo zakho kwaye ubuze imibuzo emininzi.
iityhubhu ze-alumina ceramic yobushushu obuphezulu xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo kwimarike, ineenzuzo ezigqwesileyo ezingenakuthelekiswa nanto malunga nokusebenza, umgangatho, inkangeleko, njl., kwaye inandipha igama elihle kwimarike.I-XTL ishwankathela iziphene zeemveliso ezidlulileyo, kwaye iphucula ngokuqhubekayo. bona. Ukucaciswa kobushushu obuphezulu be-alumina ceramic iityhubhu zinokulungiswa ngokweemfuno zakho.
Ukucoceka okuphezulu kunye nobushushu obunganyangekiyo ityhubhu egqunyiweyo, njengeSikhuseli soKhuseleko lweThermocouple okanye iAlumina ceramic tubes zokufudumeza into.
Ubume beCeramic Tubing sisikwere, sinamacala amabini avulekileyo, asetyenziswa ngokukodwa kwiPlasma Corona Electrode, iSpark Machine kunye nomatshini wokuCoat. Ukucaciswa kwetyhubhu ye-alumina ceramic yesikwere inokwenziwa ngokweemfuno zakho.Iinkcukacha zeMveliso:1.Izinto eziphathekayo: 95% 99% i-alumina ceramic.2.Ukuxhathisa ubushushu obuphezulu:1600℃ ukuya kwi-1800℃.3.Ingenziwa ubungakanani betyhubhu kunye netyhubhu: ewe.
Umgangatho ophakamileyo wodongwe lweCeramic Uvavanyo lomlilo Abavelisi beCrucible benyibilikisa igolide xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo kwimarike, ineenzuzo ezibalaseleyo ezingenakuthelekiswa nanto malunga nokusebenza, umgangatho, imbonakalo, njl., kwaye uyonwabela igama elihle kwimarike. I-Xingtailong ishwankathela iziphene zeemveliso ezidlulileyo kwaye ngokuqhubekayo iphucula. Iinkcukacha zomgangatho oPhezulu wodongwe lweCeramic Fire Assay Abavelisi beCrucible be-smelting yegolide banokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.I-Fire Assay Crucibles inobuxhakaxhaka obuphezulu kunobuqhelekileyo bokuqhekeka phantsi kweemeko zovavanyo lomlilo. Iikhreyibhile zethu zisetyenziswa kwiilabhoratri kwimarike yamazwe ngamazwe. Sineentlobo ngeentlobo zeemilo kunye nobukhulu obukhoyo ukukhawulelana nemigaqo efunekayo.Iibhola zethu ezinqamlezileyo zinika ubomi obude, ukunyibilika ngokukhawuleza, isantya esingagungqiyo sokunyibilika, kunye nokuxhathisa okukhethekileyo kutshintsho olunobundlobongela kubushushu.
I-6A 7A 8A yaseChina i-Fire Assay Crucible Manufacture kunye neFactory Magnesia Cupel ye-Melting Gold xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo kwimarike, ineenzuzo ezibalaseleyo ezingenakuqhathaniswa ngokubhekiselele ekusebenzeni, umgangatho, ukubonakala, njl., kwaye uyonwabela igama elihle kwimarike. I-Xngtailong ishwankathela iziphene zeemveliso ezidlulileyo kwaye ngokuqhubekayo iphucula. Iinkcukacha ze-6A 7A 8A yaseChina yoVavanyo loMlilo we-Crucible Manufacture kunye neFactory Magnesia Cupel ye-Melting Gold inokwenziwa ngokweemfuno zakho.I-Cupel sirefractory esinentunja sokufunxa ilothe oxide xa uthuthu luvuthela ikhonkco lelothe. Inxalenye ephambili ye-magnesia yi-magnesium oxide, eyi-refractory enhle kakhulu kwaye inokumelana nokukhukuliseka kwe-alkaline flux. I-Lead oxide yi-alkaline flux enamandla kakhulu. Kwiqondo lokushisa eliphezulu, ubudlelwane phakathi kwe-lead oxide kunye ne-silica yomelele kakhulu, enokuthi ihlasele i-silicate kwi-cupel. Kukho ngakumbi i-silicate kwi-ash cupel kunye ne-cement cupel. Emva kokuvuthela ngolu hlobo lwe-cupel, kuya kubakho imingxuma kumphezulu we-cupel, kwaye iintsimbi ezixabisekileyo ziyakulahleka ngenxa yoko. Ukusebenzisa i-magnesia cupel, akukho nto injalo emva kokuvuthuza komlotha, umphezulu ugudile kakhulu.
Eyona iFused iFused silica crucible crucible, quartz smelting Clay Crucible Manufacturers isitya segolide kunye neplatinam-XTL
I-quartz esemgangathweni ekhethiweyo njengezinto eziphathekayo, ezidityaniswe nomsebenzi we-ceramic ophuculweyo, osetyenziselwa ukunyibilikisa iplatinam, igolide, isilivere, ubhedu kunye nenye ingxubevange yobushushu obuphezulu, ubunyulu obuphezulu, i-anti-corrosion, i-asidi eqinile kunye nealkali eyomeleleyo, ukuqina okulungileyo, ukothuka okuphezulu kwe-thermal. ukuxhathisa. Icandelo eliphambili yi-SiO2 ≥80%, Al2O3 (≤17%) kunye nenye yi-3% ( K2O, Na2O, Fe2O3), Akukho kuqhekeka emva kwe-10 amaxesha okushisa ngokukhawuleza kunye nokubanda ngequbuliso kwi-1100℃⇌ 20℃, kwaye akukho crack emva kwamaxesha e-10 usebenzisa isibhamu sokusika i-oxygen ukutshiza i-1700-1800 ilangatye kwi-crucible.I-silica edibeneyo yokunyibilikisa i-crucible, i-quartz yokunyibilika kwe-Crucible Manufacturers isitya segolide kunye neplatinam xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo kwimarike, ineenzuzo ezingenakuqhathaniswa ezibalaseleyo malunga nokusebenza, umgangatho, ukubonakala, njl., kwaye uyonwabela igama elihle kwimarike. I-Xngtailong ishwankathela iziphene zeemveliso ezidlulileyo kwaye ngokuqhubekayo iphucula. Iinkcukacha ze-Fused silica melting crucible, i-quartz yokunyibilika kweCrucible Manufacturers isitya segolide kunye neplatinam inokwenziwa ngokweemfuno zakho.
Eyona Nkampani yokunyibilikisa yodongwe lweGraphite yeCrucible Manufacturers-XTL
Isithando somlilo sokunyibilikisa udongwe lweGraphite Abavelisi beCrucible xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo kwimarike, ineenzuzo ezibalaseleyo ezingenakuthelekiswa nanto malunga nokusebenza, umgangatho, inkangeleko, njl., kwaye uyonwabela igama elihle kwimarike. I-Xngtailong ishwankathela iziphene zeemveliso ezidlulileyo kwaye ngokuqhubekayo iphucula. Iinkcukacha ze-Induction furnace melting Clay Graphite Crucible Manufacturers zingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.I-graphite crucibles isetyenziswa ngokubanzi ekunyibilikeni kweentsimbi zesixhobo se-alloy, isinyithi esingenawo i-ferrous, kunye ne-alloys yazo kwi-metallurgy, casting, machine, chemicals, kunye namanye amacandelo oshishino, kwaye ibe nemiphumo emihle yobugcisa kunye nezoqoqosho.
Eyona iCorundum Mullite iRefractory yeceramic yesaga yetreyi yoDongwe Umzi-mveliso oNxulutywayo woDongwe weNkampani yeKiln erefractory- XTL
I-Refractory Ceramic Sagger idla ngokuba nkulu kwaye isetyenziselwa ukukhusela okanye ukuxhasa iimveliso ngexesha lokudubula, umzekelo kwiglost okanye kwibhiskithi yokutshisa i-tableware, okanye i-powder calcination, njl njl. .I-Round Saggars: Iisaggas ezingqukuva okanye ezimbhoxo.I-Square Saggars: Isikwere, uxande, okanye ezinye iisaggas ezilula.IiSaggas eziKhethekileyo: IiSaggas ezinemilo entsonkothileyo.I-Corundum Mullite Refractory ceramic sagger tray Clay Crucible Factory for refractory Kiln xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo kwimarike, ineenzuzo ezibalaseleyo ezingenakuthelekiswa nanto malunga nokusebenza, umgangatho, inkangeleko, njl., kwaye uyonwabela igama elihle kwimarike. I-Xngtailong ishwankathela iziphene zeemveliso ezidlulileyo kwaye ngokuqhubekayo iphucula. Iinkcukacha ze-Corundum Mullite Refractory ceramic sagger tray Clay Crucible Factory ye-refractory Kiln inokwenziwa ngokweemfuno zakho.
Sizimisele ukuvelisa ezona mveliso zisemgangathweni ngamaxabiso akhuphisanayo. Ngoko ke, simema ngokunyanisekileyo zonke iinkampani ezinomdla ukuba ziqhagamshelane nathi ngolwazi olungakumbi.
UKUBAMBE NGCONO ISHISHINI ELINGCONO
Idilesi yeNkampani: Shentan Industrial Zone, Liling, Hunan, 412200
Ulwimi Imephu yesiza
Ilungelo lokushicilela © 2022 Liling xing tai ende ekhethekileyo yeceramic co.,ltd Onke Amalungelo Agciniwe.